Peerplays စျေး - အွန်လိုင်း PPY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Peerplays (PPY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Peerplays (PPY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Peerplays ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 241 458.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Peerplays တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Peerplays များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PeerplaysPPY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.385PeerplaysPPY သို့ ယူရိုEUR€0.326PeerplaysPPY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.294PeerplaysPPY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.35PeerplaysPPY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr3.43PeerplaysPPY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.42PeerplaysPPY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč8.5PeerplaysPPY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.43PeerplaysPPY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.51PeerplaysPPY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.538PeerplaysPPY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$8.48PeerplaysPPY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.99PeerplaysPPY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.07PeerplaysPPY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹28.86PeerplaysPPY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.65.06PeerplaysPPY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.528PeerplaysPPY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.588PeerplaysPPY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿11.99PeerplaysPPY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.68PeerplaysPPY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥41.04PeerplaysPPY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩457.25PeerplaysPPY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦148.84PeerplaysPPY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽28.13PeerplaysPPY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴10.53
PeerplaysPPY သို့ BitcoinBTC0.00003 PeerplaysPPY သို့ EthereumETH0.001 PeerplaysPPY သို့ LitecoinLTC0.00709 PeerplaysPPY သို့ DigitalCashDASH0.00425 PeerplaysPPY သို့ MoneroXMR0.00433 PeerplaysPPY သို့ NxtNXT30.06 PeerplaysPPY သို့ Ethereum ClassicETC0.0568 PeerplaysPPY သို့ DogecoinDOGE111.22 PeerplaysPPY သို့ ZCashZEC0.00468 PeerplaysPPY သို့ BitsharesBTS11.87 PeerplaysPPY သို့ DigiByteDGB12.33 PeerplaysPPY သို့ RippleXRP1.37 PeerplaysPPY သို့ BitcoinDarkBTCD0.0133 PeerplaysPPY သို့ PeerCoinPPC1.28 PeerplaysPPY သို့ CraigsCoinCRAIG175.61 PeerplaysPPY သို့ BitstakeXBS16.44 PeerplaysPPY သို့ PayCoinXPY6.73 PeerplaysPPY သို့ ProsperCoinPRC48.36 PeerplaysPPY သို့ YbCoinYBC0.000207 PeerplaysPPY သို့ DarkKushDANK123.69 PeerplaysPPY သို့ GiveCoinGIVE834.77 PeerplaysPPY သို့ KoboCoinKOBO87.81 PeerplaysPPY သို့ DarkTokenDT0.355 PeerplaysPPY သို့ CETUS CoinCETI1113.19